Facebook တွင်ပိတ်ဆို့ခြင်း - VidaBytes | LifeBytes
Encarni Arcoya | 31/05/2022 08:31 | အပ်ဒိတ်လုပ်ထားသည်။ 31/05/2022 08:32 | လူမှုရေးကွန်ယက်
ဘယ်သူနဲ့ အနည်းဆုံး ဘယ်သူက ဖေ့စ်ဘုတ်ခ်ပေါ်မှာ တစ်စုံတစ်ယောက်ကို ပိတ်ဆို့ထားလဲ။ တခါတရံမှာ ခင်မင်ရင်းနှီးမှုတောင်းတဲ့ အတုအယောင်ပရိုဖိုင်တွေကြောင့် ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပေမယ့် တခြားအချိန်တွေမှာလည်း လူတစ်ဦးနဲ့ ငြင်းခုံနေတာကြောင့် ဒါမှမဟုတ် ကျွန်တော်တို့ကို နာကျင်စေခဲ့တဲ့ လိမ်ညာမှုတွေကြောင့် သူ့ကိုဖမ်းမိသွားတာမျိုးလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ Facebook ပေါ်တွင် ပိတ်ဆို့ခြင်းကို ပြန်ဖွင့်ရန် ကျွန်ုပ်တို့ စဉ်းစားနိုင်သော်လည်း ၎င်းကို မည်သို့လုပ်ဆောင်မည်နည်း။ ပိတ်ဆို့ခြင်းကဲ့သို့ လွယ်ကူပါသလား။
နောက်တစ်ခုကတော့ Facebook မှာ unblock လုပ်နည်းနဲ့ ရိုးရှင်းတဲ့နည်းလမ်းကို မျှဝေပေးပါမယ်။ ဤအတွက်ကြောင့်သော်လည်းကောင်း၊ သင့်ရှေ့မှာ ပိတ်ဆို့ထားတဲ့လူတွေ ရှိရမယ်။. လုပ်သာလုပ်?
1 Facebook ပေါ်တွင် သင်နှင့်မကိုက်ညီသော ပရိုဖိုင်များကို တိုက်ဖျက်ရန် လက်နက်ဖြစ်သည်။
2 Facebook တွင် block လုပ်နည်း
2.1 ကွန်ပြူတာကနေ Facebook ကို Unblock လုပ်ပါ။
2.2 မိုဘိုင်းမှ လော့ခ်ဖွင့်ပါ။
2.3 ကျွန်ုပ်၏ ကုမ္ပဏီစာမျက်နှာမှ တစ်စုံတစ်ဦးကို ပိတ်ဆို့လိုပါက မည်သို့လုပ်ဆောင်မည်နည်း။
3 တစ်ယောက်ယောက်ကို ပိတ်ဆို့ရင် ဘာဖြစ်မလဲ။
Facebook ပေါ်တွင် သင်နှင့်မကိုက်ညီသော ပရိုဖိုင်များကို တိုက်ဖျက်ရန် လက်နက်ဖြစ်သည်။
လူမှုကွန်ရက်များသည် တီထွင်မှုကြီးတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ကျွန်ုပ်တို့အား လူပေါင်း ဆယ်ဂဏန်း၊ ရာနှင့်ချီ၊ ထောင်နှင့်ချီသော လူများနှင့် ဆက်သွယ်နိုင်စေပါသည်။ သိသည်ဖြစ်စေ၊ မသိသည်ဖြစ်စေ အလုပ်၊ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာဖြစ်စေ စီးပွားဖြစ်၊
ပြဿနာမှာ လူတစ်ဦးသည် အခြားတစ်ဦးနှင့် ဆိုးဆိုးရွားရွား ပေါင်းဖော်မိသောအခါ၊ ၎င်းတို့ထုတ်ဝေသောအရာကို ဖုံးကွယ်လိုသည့်အထိ ပိတ်ဆို့မှုများ ပေါ်ပေါက်လာသောအခါတွင်၊ လူတစ်ဦးကို ပရောပရည်လုပ်ရန် သို့မဟုတ် လိမ်လည်လှည့်ဖြားရန် အသုံးပြုသည့် ပရိုဖိုင်များနှင့် အလားတူဖြစ်နိုင်သည်။ ဤကိစ္စများအားလုံးတွင်၊ ပိတ်ဆို့ခြင်းသည် စိတ်တည်ငြိမ်ရန် အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းချက်ဖြစ်သည်။.
Blocking လုပ်ရတာ အရမ်းလွယ်ပါတယ်။ ထိုလူ၏ပရိုဖိုင်ကို ရိုးရှင်းစွာကြည့်ရှုပြီး အလျားလိုက်အစက်သုံးစက်ကို နှိပ်ပါ။ “ထုတ်ဝေမှုများ၊ အချက်အလက်၊ သူငယ်ချင်းများ၊ ဓာတ်ပုံများ…” မီနူးပြီးနောက် ညာဘက်တွင် ပေါ်လာသည်။
ထိုသို့လုပ်ဆောင်သောအခါတွင်၊ သေးငယ်သောမီနူးတစ်ခုပေါ်လာမည်ဖြစ်ပြီးသင့်အားပေးသောနောက်ဆုံးရွေးချယ်မှုသည်ပိတ်ဆို့ရန်ဖြစ်သည်။ Facebook ကို နှိပ်လိုက်ရင် အဲဒီလူက မလုပ်နိုင်သမျှကို အကြောင်းကြားပါလိမ့်မယ်။
သင်၏ timeline တွင် သင့်ပို့စ်များကို ကြည့်ပါ။
ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ ပွဲများ သို့မဟုတ် အဖွဲ့များထံ။
သင့်အား ၎င်းတို့၏ သူငယ်ချင်းများစာရင်းတွင် ထည့်ပါ။
သင့်သူငယ်ချင်းများထံမှပင် သူမကို ဖယ်ရှားပစ်မည်ဖြစ်သည်။
သင်အတည်ပြုရန်သာ လိုအပ်ပြီး ထိုလူသည် သင့်သူငယ်ချင်းများစာရင်းတွင် အလိုအလျောက်ပါဝင်တော့မည်မဟုတ်သည့်အပြင် သင့်နောက်သို့လိုက်နိုင်တော့မည်မဟုတ်ပါ (အနည်းဆုံး ၎င်းတို့၏အကောင့်ဖြင့်)။
Facebook တွင် block လုပ်နည်း
အသုံးပြုသူတစ်ဦး၏ ပရိုဖိုင်ကို လော့ခ်ဖွင့်သည့်အခါ၊ သင်လုပ်ပုံလုပ်နည်းအပေါ်တွင်မူတည်ကြောင်း မှတ်သားထားသင့်သည်။ဆိုလိုတာက သင်က ကွန်ပျူတာသုံးတာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ မိုဘိုင်းကနေတစ်ဆင့် လုပ်တာပါ။
ဤတွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်အား နည်းလမ်းနှစ်မျိုးလုံးဖြင့် ပြုလုပ်ရန် အဆင့်များကို ချန်ထားခဲ့ပြီး၊ သင့်အတွက် အသင့်တော်ဆုံးကို ရွေးချယ်ရန်သာ လိုအပ်ပါသည်။
ကွန်ပြူတာကနေ Facebook ကို Unblock လုပ်ပါ။
ကွန်ပြူတာ နဲ့ အရင် စလိုက်ရအောင် ၊ ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ ဒါက လုပ်ရတာ အလွယ်ဆုံး ပါ။ မြန်သည်။ အဲဒါအတွက်၊ မင်းရဲ့ Facebook ထဲကို ဝင်ရမှာ. ဒါကိုလုပ်ဖို့ အလွယ်ဆုံးနည်းလမ်းက သင့်ပရိုဖိုင်ကို သွားပါ၊ လက်တွေ့မှာ ပင်မစာမျက်နှာကနေ သင်လည်း အဲဒီကို ရောက်နိုင်ပါတယ်။
ဘာကိုရှာသင့်သလဲ။ ညာဘက်အပေါ်နားက ရက်စွဲလေးတစ်ခု။ သူမ၌ မီနူးငယ်တစ်ခု ပြသမည်ဖြစ်ပြီး သင်သည် ဆက်တင်များနှင့် လျှို့ဝှက်ရေးအား ရွေးချယ်ရမည်ဖြစ်သည်။.
၎င်းကိုနှိပ်လိုက်သောအခါ၊ ဝင်းဒိုးအသစ်တစ်ခုပေါ်လာမည်ဖြစ်ပြီး၊ ဘယ်ဘက်ရှိမီနူးတွင် ဤနေရာတွင်၊ Settings ကိုသွားရပါမယ်။. နောက်တစ်ခုက စာမျက်နှာတစ်ခုပွင့်လာမယ်။ Lock option ကိုရှာသင့်ပါတယ်။. ဟုတ်တယ်၊ ငါတို့က ပြန်ဖွင့်တော့မယ်၊ ဒါပေမယ့် အဲဒါအတွက် ငါတို့မှာ ပိတ်ဆို့ထားတဲ့ ပရိုဖိုင်တွေ ရှိရမယ်။
သင်ပေးသောအခါတွင် သင်ပိတ်ဆို့ထားသောလူများစာရင်းကို သင်ရရှိမည်ဖြစ်သည်။
ယခု Facebook တွင် သင် unblock လုပ်လိုသော နေရာကိုသာ ရှာရပါမည်။ ပြီးလျှင် သင့်အမည်ဘေးရှိ စကားလုံးသော့ဖွင့်ခြင်းကို နှိပ်ပါ။
အကယ်၍ သင်သည် Facebook အက်ပ်ကို မကြာခဏ အသုံးပြုပါက၊ ၎င်းနှင့် လော့ခ်ဖွင့်လိုခြင်း ဖြစ်နိုင်သည်။ သို့ဆိုလျှင် သင်လုပ်ဆောင်ရမည့် အဆင့်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
သင့်ပရိုဖိုင်ပုံပေးပါ။ ထို့အပြင်၊ သင့်တွင် အလျားလိုက် အစင်းသုံးချောင်းပါသည့် အိုင်ကွန်ငယ်တစ်ခုရှိသည်။ ၎င်းသည် သင့်အား အခြားမျက်နှာပြင်သို့ ခေါ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်သည်။
ဒီမှာ, ဆက်တင်များနှင့် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအား သင်တွေ့သည်အထိ အောက်သို့ဆင်းပါ။. နှိပ်ရင် နောက်ထပ် Menu လေးတစ်ခုပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ Settings ကိုနှိပ်ပါ။.
configuration အတွင်းတွင် ကဏ္ဍများစွာကို တွေ့ရပါမည်။ ဒါပေမယ့် တကယ်က ဘာလဲ၊Profile Settings ကို နှိပ်ဖို့ လိုပါတယ်။.
သင်နှိပ်လိုက်သောအခါတွင် မီနူးအသစ်တစ်ခု ပေါ်လာမည်ဖြစ်ပြီး ၎င်းသည် သင့်အားပေးသော ရွေးစရာများထဲမှ၊ Block များ ပေါ်လာပါမည်။ စာနယ်ဇင်း.
ဤနေရာတွင် သင်ပိတ်ဆို့ထားသော လူများစာရင်းကို သင်တွေ့ရပါမည်။ သင်လုပ်ရမှာက လူကိုရှာပါ။ သို့မဟုတ် သင် "လော့ခ်ဖွင့်လိုသော" နှင့် ၎င်းတို့၏ပရိုဖိုင်၏ညာဘက်ဘေးရှိ "လော့ခ်ဖွင့်ရန်" ခလုတ်ကို နှိပ်ပါ။
ကျွန်ုပ်၏ ကုမ္ပဏီစာမျက်နှာမှ တစ်စုံတစ်ဦးကို ပိတ်ဆို့လိုပါက မည်သို့လုပ်ဆောင်မည်နည်း။
သင့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာပရိုဖိုင်ဖြင့် ပိတ်ဆို့ခြင်းအား သင်မလုပ်ဆောင်ဘဲ သင့်ကုမ္ပဏီစာမျက်နှာတွင် ဖြစ်သွားနိုင်သည်။ သင်နှင့် သင့်ထုတ်ကုန်များ၊ Spam မက်ဆေ့ချ်များ စသည်တို့ကို တိုက်ခိုက်သူများ၊ ပိတ်ဆို့ရန် ဆုံးဖြတ်ချက်ချရသည့် အကြောင်းရင်းအချို့ရှိနိုင်သည်။ ဒါပေမယ့် အဲဒါကို လော့ခ်ဖွင့်ချင်ရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။
ဒီလိုလုပ်ဖို့, မင်းရဲ့ Facebook စာမျက်နှာကို သွားရမယ်။. သင်သိသည့်အတိုင်း စာမျက်နှာတိုင်းတွင် သင့်တွင် ဆက်တင်ခလုတ်တစ်ခုရှိသည်။ စာနယ်ဇင်း။
ဘယ်ဘက်ကော်လံမှာ သင့်တွင် 'လူများနှင့် အခြားစာမျက်နှာများ' ဟုခေါ်သည့် ကဏ္ဍတစ်ခု ရှိလိမ့်မည်၊. သင့်စာမျက်နှာကို ကြိုက်နှစ်သက်သူများ၊ သင့်အား Follow ထားသူများ၊ စသည်တို့ကို ကြည့်ရှုရန် အသုံးပြုပါသည်။ ဒါပေမယ့်လည်း ဒီမှာ သင်လုပ်ထားတဲ့ လုပ်ကွက်တွေကို တွေ့လိမ့်မယ်။
သင်ပိတ်ဆို့လိုသောအသုံးပြုသူကိုရွေးချယ်ပါကညာဘက်နှင့်ထိပ်တွင် ဘီးအနည်းငယ်ပေါ်လာပါမည်။ အဲဒီမှာသင်သော့ဖွင့်နိုင်ပါတယ်။
ဤအရာသည် သင်လုပ်ဆောင်လိုကြောင်း အတည်ပြုပြီး ၎င်းသည် ပြန်လည်အသက်ဝင်လာမည်ဖြစ်သည်။
တစ်ယောက်ယောက်ကို ပိတ်ဆို့ရင် ဘာဖြစ်မလဲ။
မင်းသိတဲ့အတိုင်း, လူတစ်ဦးကို ပိတ်ဆို့ထားသောအခါတွင် ၎င်းတို့သည် သင့်အား ဆက်သွယ်ခြင်းမှ တားဆီးခံရသည်။. ၎င်းတွင် မက်ဆေ့ချ်များသာမက သင့်ပရိုဖိုင်ကို မြင်နိုင်သည် (အနည်းဆုံး လူသိရှင်ကြားမပြပါက ပိတ်ဆို့ပြီးနောက် သင်တင်ထားသည်ကို)။
ဆိုလိုတာက Facebook ကို unblock လုပ်တဲ့အခါ၊ မင်းရဲ့ စာပေတွေကို မြင်နိုင်စေဖို့၊ မင်းသူငယ်ချင်းဖြစ်လာဖို့၊ မင်းကို မက်ဆေ့ချ်ပို့ဖို့ သူ့ကို ခွင့်ပြုလိမ့်မယ်။, etc
လော့ခ်ဖွင့်ပြီးရင် မင်းစိတ်ပြောင်းသွားပြီဆိုတာ သိလိုက်ပါ။ ထပ်မံပိတ်ဆို့ရန် ၄၈ နာရီစောင့်ရပါမည်။.
သေချာပါတယ်၊ သင်ပိတ်လိုက်တဲ့အခါနဲ့ လော့ခ်ဖွင့်တဲ့အခါ နှစ်ခုလုံးက သင့်ကို အာမခံပါတယ်၊ အသုံးပြုသူအား အသိပေးခြင်း မပြုရ၊ ဆိုလိုသည်မှာ သူသည် မည်သည့် အသိပေးချက် အမျိုးအစားကိုမျှ လက်ခံရရှိမည်မဟုတ်ပါ။. ပိတ်ဆို့ခံရခြင်း သို့မဟုတ် ပိတ်ဆို့ခြင်းခံရပါက သင်သိနိုင်သည့် တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းမှာ သင့်ပရိုဖိုင်သို့ သွားခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုတွေ့ပါက၊ ၎င်းကိုသော့ဖွင့်ထားသည်။ မဟုတ်ပါက ပိတ်ဆို့ထားကြောင်း သင်သိလိမ့်မည်။
Facebook မှာ ဘယ်လိုပြန်ဖွင့်ရမယ်ဆိုတာ ရှင်းနေလား။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - LifeBytes » လူမှုရေးကွန်ယက် » facebook မှာ unblock လုပ်ပါ။